ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - ဗဟန်း
​ရွေှ​တောင်​ကြား ၊ ဗဟန်​းမြို့နယ်တွင်ရှိသောပေ( 80×100 )အကျယ်ရှိ2 RC ,2Master Bed Room ,3Singl...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - ကွန်ဒို - စမ်းချောင်း
စိတ်၀င်စားပါက ဆက်သွယ််န်ိုင်ပါသည်.........။ 09964 546 754,09 798233825
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - လှိုင်သာယာ
FMI City တွင် အိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
FMI City ရှိ Finger Lake တွင်လှပပြီးလှပသောလှပသောအိမ်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ ဤ villa သည်သင်၏အခြေခံလူနေမှုလိုအ...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - ကွန်ဒို - ဗဟန်း
အဌားပို့စ်ပါ... For Rent!!! Fully Furnished ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာပလာဇာအနီး ဗဟန်းမြို့နယ် လူစည်ကားရာ...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - ကွန်ဒို - လှိုင်
က်ယ္၀န္ေးသာကားပါကင္နွင့္ ရိုးရွင္းေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ဖန္တီးထားပီး အိမ္ကို ေျကြးျပားနွင့္ပါေကး ခင္းထ...
ပါရမီလမ်းရှိ ပန့်ဟောက်စ်ကွန်ဒို ငှားရန်
Fully Furnished Luxury Penthouse Condo For Rent! Myo Thiha (Find Property) Email Address: myot...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - မြေကွက်၊ခြံ - သင်္ဃန်းကျွန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက် ၊ ကမာကြည်...
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက် ၊ ကမာကြည်အိမ်ရာရှိ (0.161)ဧက၊ (7000)Sqft ၊ မြေသီးသန့်၊ ဂရန်မြေ၊...
7000 Sqft ft2